Inguqulelo entsha yeHighes of Might and Magic II 0.8.3 sele ikhutshiwe | Ubunlog
Inguqulelo entsha yeHighes of Might and Magic II 0.8.3 ikhutshiwe
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo sabelane ngeendaba ze Ukubuya kwaMagorha amakhulu kunye noMlingo II okoko iprojekthi yayinqunyanyisiwe iminyaka eliqela, de iqela labantu lagqiba kwelokuba iphinde iqhubeke le projekthi.
Kulabo abangazi Amagorha aMandla kunye noMlingo II, Kufuneka bazi ukuba yintoni umdlalo weqhinga elisekwe ekujikeni yaphuhliswa ngo-1996. Ibali lesihloko iyaqhubeka nokuphela kwe-canonical ye-predecessor yayo, incopho yoloyiso lweNkosi Morglin Ironfist.
Umdlalo unamaphulo amabini, enye iqhutywa yinkcaso (eyi-canonical) kwaye enye yasebukhosini. Indlela eqhubela phambili i-adventure ihlala ifana. Umdlali kufuneka akhe ubukumkani, aqhubeke ehlaziya, efumana izixhobo, eqeqesha amajoni, kwaye elungele ukumisa uhlaselo lotshaba. Kwangokunjalo, eyona njongo iphambili kukufumana inqaba yomchasi kwaye uyoyise.
Abaphuhlisi babonisa ukuba iqela alinabo abayili ukuba iprojekthi Kuya kufuneka ulungise iziphene kwimifanekiso eshukumayo yoqobo.
Ukuthatha inxaxheba kwizicwangciso zokucinga malunga nokuphuhliswa kolwandiso kukwakhuthazekile, apho abaphuhlisi baya kuhamba emva kokuba bewuphumelele umdlalo wokuqala ngokupheleleyo.
1 Iimpawu eziphambili zeHighes of Might and Magic II 0.8.3
2 Uyifaka njani iHeroves of Might and Magic II kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Iimpawu eziphambili zeHighes of Might and Magic II 0.8.3
Kule nguqulo intsha yomdlalo abaphuhlisi sele beqalisile sebenza ekwaziseni i-AI entsha. Izixeko ngoku zakha ngokufanelekileyo. Abachasayo abahlali bengenzi nto, endaweni yoko baqesha amajoni kwaye baphuhlise imimandla emitsha ngenjongo. Ekulweni, abachasi bakhetha iindlela ezithile zokuziphatha, kuxhomekeke kwimeko yedabi.
Kwakhona, zilungiswe ezininzi iibhugs ezibonisa imifanekiso kwizikrini zedolophu. Umzekelo, kwinqaba yabaphambukeli, izakhiwo ezininzi ngoku zinikezelwe ngokupheleleyo xa kuthelekiswa nomdlalo wokuqala. Ngapha koko, lUmkhosi wamahashe kunye neetrolls ezivela kumdlalo wokuqala ziye zahlengahlengiswa: Ihashe lokubopha amahashe ngoku lenziwe ngombala omnye, kwaye ilitye leetrolls alitshintshi umbala xa liphoswa.
Umsebenzi wenziwe kakuhle-Ukunikezelwa kwemephu kukhawulezisiwe nge-20%, eya kuthi ivumele umdlalo ukuba usebenze ngokutyibilikayo kwizixhobo ezininzi ezinephrofayili eseHeroes 2 esele ixhasa inxenye.
Ukulayishwa kwevidiyo kukhawulezisiwe, kwaye kudlalwa ngaphandle kokulala. Umboniso wevidiyo wongezwa ekumiselweni komdlalo nasemva kokuphela kwesikripthi, kwaye ngaphezulu kwekhulu leebugs kunye namakhulu aliqela emicimbi yokuhlanganiswa sele ilungisiwe.
Okokugqibela, ukuba unomdla wokwazi ngakumbi malunga nokukhutshwa kwale nguqulo intsha. Ungajonga iinkcukacha Kule khonkco ilandelayo.
Uyifaka njani iHeroves of Might and Magic II kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Kulabo abanomdla wokukwazi ukufaka lo mdlalo kwinkqubo yabo, kufuneka ubuncinci inguqulelo yedemo yomdlalo Amagorha aMandla kunye noMlingo II ukuze abe nakho ukuyidlala.
Ukwenza oku, sebenzisa nje enye yeempendulo ezinokukhutshelwa ezifumanekayo ukufumana uhlobo lwedemo lomdlalo wokuqala.
Lo nto yeLinux ufakelo olucacileyo lwe-SDL luyafuneka kwaye oku kwanele ngeskripthi / kwi-Linux ngokwendlela yokusebenza kwenkqubo yakho kwaye wenze ifayile
Después Isikripthi kufuneka senziwe ifunyenwe kwi / script
Ukuze ukwazi ukukhuphela idemo yomdlalo ofunekayo kuphuhliso oluncinci.
Nje ukuba kwenziwe oku, yenza nje kulawulo lweengcambu zeprojekthi. Ukudityaniswa kwe-SDL 2, umyalelo kufuneka uqhutywe ngaphambi kokwenza iprojekthi.
Ikhowudi yeprojekthi ibhaliwe kwi-C ++ kwaye ihanjiswa phantsi kwelayisensi ye-GPLv2. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga neprojekthi okanye ujonge ikhowudi yemvelaphi. Ungayenza kwikhonkco elingezantsi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Imidlalo » Inguqulelo entsha yeHighes of Might and Magic II 0.8.3 ikhutshiwe
Isangqa iiwijethi, ulwandiso olubonisa ulwazi lwenkqubo
Izicelo ze KDE 20.08.3 ifika nezilungiso zamva kolu ngcelele